अधिवेशन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, असोज १४ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारसँग माग गर्ने भएको छ । बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकन्ठमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी
देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा कांग्रेस अधिवेशनको चहलपहल
डडेल्धुरा, असोज ८ । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा कांग्रेसको अधिवेशनको चहलपहल बढ्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि डडेल्धुराबाट सांसद निर्वाचित सभापति देउवा २७ महिनायता
संसदको विशेष अधिवेशन तत्काल बसाल्न कांग्रेसले माग गरोस्ः अर्जुननरसिंह केसी
काठमाडौं, असोज ४ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसदको विशेष अधिवेशन तत्काल बसाल्न नेपाली कांग्रेसले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुलुक सम्पूर्ण रुपमा संकटमा रहेका बेला संसद बन्द
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचनः प्यानल घोषणा गर्दै चन्द्र ढकालले जनाए गोल्छाको रवैयाप्रति आपत्ति
काठमाडौं, असार ३० । देशभरका उद्योगी व्यवसायीलाई कोरोनाको संकटकै समयमा पनि चुनावको चटारोले छापेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्न दुई पक्ष प्यानल नै
नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा चरम विवाद, केसीलाई बनाइयो अध्यक्ष, विष्ट हटाइए
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका फेरि विवादमा फसेको छ । नयाँ नेतृत्व चयनको विषय विवादमा फसेको जनसम्पर्क समितिमा पहिलेदेखि नै बेमेल थियो । कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यसमेत
नेपाल रेडक्रससँग सात दिने स्पष्टीकरण माग, कार्यसमिति भंग हुने !
काठमाडौं, असार २५ । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेपाल रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमितिलाई कार्वाही गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो । असार २३ गते
मन्त्रीको बोली ! ‘संसद रत्यौली खेल्न चलाइरहने संस्था होइन’
काठमाडौं, असार २० । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले संसद रत्यौली खेल्ने ठाउँ नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ९८ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको